​ १ नम्बर ट्रेण्डिङमा ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२
काठमाडौं । यो साता यु–ट्युबमा रिलिज गरिएका गीतमध्ये अग्रपंक्ति छ, ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’ । यो गीत गीतकार दर्पण राईको चर्चित गीत ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे’को सिक्वेल हो । दर्शक/श्रोताले ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’लाई अत्याधि रुचाएका छन् । जसले गर्दा यो गीत यु–ट्युबमा १ नम्बर टेण्डिङमा पर्न सफल भएको छ । यो गीत रिलिज गरेको तीन दिनमै साढे सात लाखले हेरेका छन् । ५० नम्बरबाट लागार… विस्तृत समाचार
दर्शकलाई निःसन्तानका कथासँगै प्रेमकथा
काठमाडौं । शुक्रबार आज सिनेमा हलमा दुई नेपाली फिल्म ‘प्रसाद’ र ‘झिल्के’ रिलिज भएको छ । दर्शकले फिल्म ‘प्रसाद’मा निःसन्तान दम्पत्तिको कथा हेर्न पाउनेछन् भने ‘झिल्के’मा प्रेमकथा । अधिकांश फिल्मका प्रेमिल जोडी कथा हेर्दै आएका दर्शकका लागि ‘प्रसाद’ केही नयाँ स्वाद हुनसक्छ । फिल्म ‘प्रसाद’लाई रंग पत्रकार सुशील पौडेलले लेखेका हुन् । जसको निर्देशन दिनेश राउतले गरेका छन् । ‘प्रसाद’मा विपिन कार्की, नम्रता श्रेष्ठ, निश्चल… विस्तृत समाचार
​छोरीलाई हौसला दिन जम्बो टोलीसहित चीन पुगे विरोध खतिवडा
काठमाडौं । ६८औँ ‘मिस वल्र्ड’को ग्राण्ड फिनाले भोली शनिबार चीनको सान्या सहरमा हुँदैछ । ‘मिस वल्र्ड–२०१८’को ग्राण्ड फिनाले हुन गइरहँदा नेपालीमा पनि चासो बढ्दै गएको छ । केही सातायता ‘मिस नेपाल–२०१८’की विजेता शृंखलालाई ‘मिस वल्र्ड’ जिताउन सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलिको छ । ११८ देशका सुन्दरीले प्रतिस्पर्धा गरेको यस संस्करणमा नेपाली चेली शृंखला खतिवडा अन्तिम ३० मा प्रवेश गरेपछि नेपालीको ध्यान ‘मिस वल्र्ड’तिर गएको हो ।… विस्तृत समाचार
​प्रियंका–निक विवाहबारे एक भ्रामक लेख
काठमाडौं । हालै विवाव बन्धनमा काँधिएकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाका फ्यानहरु एक समाचारका कारण भड्किएका छन् । अमेरिकाबाट सञ्चालित एक चर्चित अनलाइनले प्रियंका र गायक निक जोनासको विवाहका बारेमा एक शंकास्पद लेख प्रकाशित गरेपछि प्रियंका फ्यान तथा शुभतिन्तक आक्रोशित भएका हुन् । प्रियंका र निको विवाहलाई लिएर ‘द कट’ नामक पोर्टलले ‘के प्रियंका चोपडा र निक जोनसको माया साँचो हो ? भन्दै एक लेख प्रकाशित… विस्तृत समाचार
माया बाँड्दै गाउँबस्तीमा अञ्जु पन्त
काठमाडौं । चर्चित गायिका अञ्जु पन्त हिजोआज स्टुडियोमा भेटिँँदैनन् । अरुबेला दैनिक रेकर्डिङ स्टुडियोमै व्यस्त हुने गरेकी अञ्जु केही दिनयता भने तराइका विभिन्न जिल्लामा राहत बाँडिरहेकी छन् । उनले यो साता तराईका विभिन्न जिल्ला र स्थानका विद्यालयमा आफै पुगेर विद्यार्थीहरुलाई कापी, कलम र ब्यागलगायतका सामग्री विरण गरेकी छन् । गायिका अञ्जुले पछिल्लो केही वर्षयता आफूलाई सामाजिक सेवामा पनि क्रियाशील गराउँदै आएकी छन् । अञ्जु पन्त… विस्तृत समाचार
काठमाडौं । ‘हाक्पारे पाला ख्याली’ गाएर चर्चामा आएका गायक तथा मोडल रुकमान लिम्बु यसपटक ‘सालैजा’ लिएर आएका छन् । ‘कोइली चरीले’ले बोलको सालैजो गीतलाई रुकमानले आफ्नै अफिसियल च्यानल ‘रुबुशा क्रियटिभ वर्कस’मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । पुर्वेली लोकलयमा गाएको ‘हाक्पारे पालम ख्याली’मार्फत रुकमानले पुर्वी नेपालमा मात्र नभएर देशविदेशमा चर्चा पाएका थिए । त्यस्तै, गण्डक क्षेत्रको लोकप्रिय भाका ‘सालैजो’मार्फत यसपटक उनी दर्शक तथा श्रोताको मन मुटुमा मन… विस्तृत समाचार
काठमाडौं । गीतकार दर्पण राईको चर्चित गीत ‘तिम्ले बाटो फे-यौ अरे–२’लाई यु–ट्युबका दर्शकले अत्याधिक मन पराएका छन् । यो गीतको भिडियो यु–ट्युबमा अपलोड गरिएको २४ घण्टामै साढे तीन लाख बढीले हेरिसकेका छन् । यो समाचार बनाइरहँदा यो भिडियो यु–ट्युबमा १६ नम्बर ट्रेण्डिङमा छ । यो गीत गीतकार दर्पणको अघिल्लो चर्चित गीत ‘तिम्ले बाटो फे¥यौ अरे’को सिक्वेल हो । जुन गीतलाई भिडियो नै विना अडियोमात्र करिब… विस्तृत समाचार
​अवसरको पखाईमा रहेकी इनाको फोटोफिचर
काठमाडौं । मोडलिङमा संघर्षरत इना सांगाछेँको लक्ष्य फिल्मकी नायिका बन्नु हो । अध्ययनसँगै नृत्य प्रक्षिशकको भूमिका निवाह गरिरहेकी दुधपाटी भक्तपुरकी १८ वर्षीया इना सानैदेखि नृत्यमा तथा विशेषगरी चर्यानृत्यमा आफूलाई अब्बल रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी छन् । ६ बर्षकै उमेरदेखि नृत्य सिकेकी बताउँने उनले कला मण्डपका नृत्य गुरु मिन बज्राचार्य र नेपाल सांस्कृतिकका महेश हाडासँग चर्या नृत्यको प्रक्षिक्षण लिएकी छ । साथै, फेशनलाइनका सुरज लिम्बुसँग उनले… विस्तृत समाचार
अभिनेता हमालका अनौठा फ्यान !
काठमाडौं । नेपाली फिल्मका अभिनेता राजेश हमालका फ्यान हुन् उनी । हमाल भन्नासाथ उनी मरिहत्ते गर्छन् । मोरङ राजघाट दुर्गापुरीका हर्क तामाङको न राजेश हमालसँग चिनजान छ, न त उनी रिलेटिभ नै हुन् । तर, हमालप्रति गर्ने माया र व्यवहारले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाउँछ । कुरो १५ बर्षअघि हो, घरमा राजेश हमाल अभिनित देउतामा हमालको मृत्यु हुन्छ, त्यो दृश्य देख्नासाथ हर्कले राजेश हमालको मृत्यु भएको… विस्तृत समाचार
​जाडो छल्दै सोलुमा ‘सिउँदोमा सिन्दुर’
काठमाडौं । पछिल्लो समय भिडियो निर्माणमा तिव्रता आएको छ । नायक बिशाल बिष्टले यो जाडो याममा सोलुखुम्बु जस्तो बिकट तर रमणिय स्थानमा पुगेर एक साथ दुईवटा म्युजिक भिडियो छायाँकन गरि काठमाडौं फर्केका छन् । गीतकार सुभाष गौतमको शब्द रहेकोे ‘सिउँदोमा सिन्दुर’ बोलको गीतमा स्वर अनुप रेग्मी र ‘यस्तो बतास’ मा हेमन्त शर्माको रहेको छ । भिडियोका निर्देशक बिशाल बिष्ट हुन् । भिडियोमा प्रशु कथेत र… विस्तृत समाचार